UEFA Oo Sharci Halis Galin Kara Kooxaha Waa Wayn Ka Fikiraysa In Ay Champions League Ku Soo Kordhiso. - Gool24.Net
Madax waynaha xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee Aleksander Ceferin ayaa soo bandhigay qorshe ay ka fikirayaan in ay ku soo kordhiyaan tartanka Champions League kaas oo saamayn ku yeelan kara kooxaha waa wayn ee Yurub.
Madax waynaha UEFA ee Aleksander Ceferin ayaa sheegay in ay ka wada xaajoonayaan in kooxaha qaar si gaar ah loo xanaanayn doono kuwaas oo ah waliba kooxo yar yar ama heer dhexe ah kuwaas oo waxyaabo gaar ah ka sameeya Champions league.
Qorshaha UEFA ayaa ah in haddii kooxaha qaar ay u soo baxaan afar dhamaadka Champions League in sanadka ku xiga ay si toos ah ugu soo baxaan tartanka Champions League iyada oo aan loo eegin in ay horyaalkooda kaalmaha sare kaga dhamaystaan.
Aleksander Ceferin ayaa tusaale u soo qaatay kooxhaa Ajax, Monaco iyo Leicester City kuwaas oo uu tilmaamay in kooxaha shaqadii saddexdan kooxood oo kale soo sameeyay in wax gaar ah loo sameeyo.
Kooxaha Ajax, Leicester City iyo AS Monaco ayaa sanadihii ugu danbeeyay ahaa kooxihii sida gaarka ah lama filaan uga sameeyay Champions League waana nooca kooxaha uu Aleksander Ceferin doonayo in si gaar ah loola dhaqmo.
Aleksander Ceferin oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Waxaanu jecel nahay in aanu ilaalino kooxaha sida Ajax ee sanadkan, Monaco ama Leicester City ee ka hor. Sanadkan waxay Ajax ciyaartay afar dhamaadka, waxaana qasab ku ah in ay ciyaartoydooda iibiyaan, sababtoo ah ma oga haddii ay sanadka soo socda u soo bixi doonaan Champions League”.
Madax waynaha UEFA ee Aleksander Ceferin oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Waxaan filayaa in ayna waajib nagu ahayn in aanu kooxo aad u badan ilaalino, sababtoo ah kadib aad ayay iskugu dhawaanaysaa, laakiin waxaan filayaa in ay waajib nagu tahay in aanu kooxaha qaar ilaalino”.
Aleksander Ceferin oo fikradan sharaxaya ayaa yidhi: “Hal fikirad ayaa ah in kooxaha heer gaar ah ee tartankan (UCL)guulaystaa ay sanadka xidig sidoo kale ku tartami karaan, laakiin waa falanqayn oo kaliya, waxaanu kulan leenahay Septembeer 11 oo aanu la doodi doonaa horyaalada iyo kooxaha”.
Laakiin madax waynaha UEFA ee Aleksander Ceferin ayaa gabi ahaanba meesha ka saaray riyadii kooxaha waa wayn ee Super League wuxuuna yidhi: “Super League waligii ma dhici doono inta aan halkan joogo”.
Kooxaha waa wayn ee Yurub ayaan raali ka noqon doonin in kooxaha qaar ah UEFA si gaar ah u ilaaliso taas oo xataa saamaynteeda ku yeelan karta kooxaha kaalmaha sare ugu tartama in ay Champions League u soo baxaan.